November 2020 – MPTA
+95 09797304635mpta.tvet@gmail.comMonday – Friday9AM –5PM
Myanmar Private TVET Association
Existing EC Members
MPTA Member Schools
“ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့ မျှဝေခြင်း” ပရဟိတအဖွဲ့သို့ MPTA မှ ကျပ် (၆) သိန်းခွဲလှူဒါန်း
NewsBy tivetadmin November 24, 2020 Leaveacomment
“ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့ မျှဝေခြင်း” ပရဟိတအဖွဲ့သို့ MPTA မှ ကျပ် (၆) သိန်းခွဲလှူဒါန်း —————- COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေသည့် ပြည်သူများထံ တိုက်ရိုက်သွားရောက်လှူဒါန်းပေးနေသော “ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့ မျှဝေခြင်း” ပရဟိတအဖွဲ့သို့ MPTA အသင်းနှင့် အသင်းဝင်ကျောင်းများ စုပေါင်း၍ အလှူငွေ ကျပ် (၆၅၀,၀၀၀/-) ကို နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့က လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ . MPTA အနေဖြင့် COVID-19 နှင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စများတွင် ကူညီပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ရာတွင် အလှူငွေ စုစုပေါင်း (၂,၆၅၀,၀၀၀/-) ကျပ် တိတိရရှိခဲ့ကာ ဧရာဝတီစင်တာ (ရန်ကုန်) နှင့် “ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့ မျှဝေခြင်း” ပရဟိတအဖွဲ့တို့ကို မျှဝေလှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ .…
MPTA နှင့် အသင်းဝင်ကျောင်းများစုပေါင်း၍ ဧရာဝတီစင်တာ (ရန်ကုန်) အတွက် ကျပ် (၁၀) သိန်း လှူဒါန်း
UncategorizedBy tivetadmin November 23, 2020 Leaveacomment
MPTA နှင့် အသင်းဝင်ကျောင်းများစုပေါင်း၍ ဧရာဝတီစင်တာ (ရန်ကုန်) အတွက် ကျပ် (၁၀) သိန်း လှူဒါန်း ———————– COVID -19 လူနာများကို လက်ခံကုသပေးလျက်ရှိနေသည့် ဧရာဝတီစင်တာ(ရန်ကုန်) အတွက် MPTA အသင်းနှင့် အသင်းဝင်ကျောင်းများစုပေါင်း၍ ကျပ် (၁၀) သိန်းကို ယနေ့သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ . အလှူငွေများလက်ခံရာ GOAL HOTEL သို့ MPTA အသင်းနှင့် အသင်းဝင်ကျောင်းများကိုယ်စား ဒု-ဥက္ကဌ ဦးအေးချမ်းကိုကိုနှင့် EC များသွားရောက်လှူဒါန်းရာ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်မှ လက်ခံရယူပေးခဲ့ပြီး မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်က သက်မွေးပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်မှုနှင့် MPTA ကဲ့သို့သော အသင်းအဖွဲ့ရှိခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့်လည်း ကူညီနိုင်သည်များကိုကူညီရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ .…
National Education Strategic Plan 2021-2030
ActivitiesBy tivetadmin November 5, 2020 Leaveacomment
ပညာရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်အရ ပညာရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြှင့်တင်ရေး ရည်မှန်းချက်များ ၊ ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုအတွက် စီမံဆောင်ရွက်မှုများ ၊ အရည်အသွေးနှင့် တတ်မြောက်ကျွမ်း ကျင်ရေးအတွက် အကဲဖြတ်အကြံပေးမှုများ ၊ နိုင်ငံအတွင်းတည်ရှိပြီးသော ပင်မရင်းမြစ်များမှ အနာဂတ်ပညာရေးဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုရလာဒ်များအတွက် ရှိရင်းစွဲအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ ပညာရေးမဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်း များကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ဝ၅/၂ဝ၂ဝ ၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ တော်သလင်း လပြည့်ကျော် ၄ ရက် ၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် – မူဝါဒ (၂၁)/၁၁-၁၁(NESP)/၂ဝ၂ဝ (၅၈၂၄) ဖြင့် အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂ဝ၂၁ – ၂ဝ၃ဝ)…
အခြေခံပညာ အထက်တန်း ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်က စပြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ် (High School Completion Certificate) ထုတ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ “၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ မအောင်မြင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် အသက်မွေး ဝမ်း ကျောင်း သင်တန်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့၊ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိပြီး လူမှုဘဝမြင့်မားလာရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့၊ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေရရှိပြီး မိသားစုဝင်ငွေ မြင့်မားလာကာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီလက် မှတ် ကို ပေးအပ်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ် အခြေခံပညာအထက် တန်းဆင့် ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ် (HSCC) ထုတ်ပေးလိုက်သူပေါင်း ခြောက်သိန်းခွဲလောက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ လူငယ်…
Search in MPTA
Archives Select Month June 2021 (2) February 2021 (1) January 2021 (2) November 2020 (4) July 2020 (2) January 2020 (11)
Calling proposal for Essential Culinary Skills (Oriental Food) Training
Calling proposal for Plumbing (Water and Sanitary) Training
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိက နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်(၁/၂၀၂၁)
TVET Star Award 2020
ဆံပင်နှင့် မျက်နှာအသားအရေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်း” ကျင်းပနိုင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေး
No-7C, Mya Yeik Condo,
Zayar Thiri Road, 3-Quarter,
MPTA Offical Facebook
© MPTA 2019. All Rights Reserved.